Bedrock Linux: Ihe omuma Linux di nma nke Linux | Site na Linux
Bedrock Linux: Ihe omuma ihe Linux di ebube site na ndi ozo
N'ọtụtụ mbipụta nke Internet na Blog Site Linux ọ bịara doo anyị anya, oke nke amụma, ndị ọzọ na iji nke ahụ GNU / Linux Distros ha nwere ike iru. NA Linux Bedrock bụ ezigbo ihe atụ nke oke ahụ.
Linux Bedrock bụ ihe pụtara ìhè mmepe nke Software Nwepu n'ụdị GNU / Linux meta-nkesa nke ihu ọma na-enye ohere ya ọrụ, na enwe ọtụtụ atụmatụ dị iche iche, arụmọrụ ma ọ bụ uru nke iche iche GNU / Linux Nkesa, nke na-abụkarịkarị "Naanị iche", nke ahụ bụ, ekwekọghị, karịsịa na nchịkọta na iwu.
Dị ka ndị mmepe ya si dị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, Linux Bedrock es:
"Una Linux meta-nkesa na-enye ohere ka ndị ọrụ jiri atụmatụ nke nkesa ndị ọzọ, nke a na-ekewaghị ekewa. N'ụzọ bụ isi, ya na ọrụ nwere ike mix na dakọtara mmiri dị ka chọrọ".
Ma kpọmkwem gịnị ka nke ahụ pụtara?
Ọ pụtara na, dịka ọmụmaatụ, na ọ bụ ihe anyị nwere ike ime iji mee ihe n'isiokwu a, anyị nwere ike inwe a GNU / Linux nkesa MX Linux 19 o DEBIAN 10, wụnye Linux Bedrock, na nke ikpeazụ, na-akwado Distro dị iche iche dakọtara ma ọ bụ na ọ bụghị, dị ka Arch Linux, n'ime ụdị akpa akpọrọ Stratum.
Otú ọ dị, Linux Bedrock na nke ugbu a mmepe ụdị, na nọmba mbipute 0.7, na-akwado echichi nke GNU / Linux Distros na-esote: alpine, arch, centos, debian, devuan, exherbo, exherbo-musl, fedora, gentoo, ubuntu, void, na void-musl.
1 Linux Bedrock
1.1 Kedu ihe ọzọ Bedrock Linux nwere ike?
1.2 Etu esi etinye Bedrock Linux na MX Linux 19 na / ma obu DEBIAN 10?
1.2.2 Ihe edeturu
Kedu ihe ọzọ Bedrock Linux nwere ike?
Na nkọwa mmadụ nwere ike ịwụnye Linux Bedrock na Distro ọgbara ọhụrụ ma dị mfe ịbanye na ya:
Jiri CentOS ochie / kwụsiri ike ma ọ bụ nke DEBIAN.
Wụnye Arch Linux ma nwee ohere nchịkọta ọhụụ ya ma ọ bụ AUR repos.
Inwe ike machiini ichikota ngwugwu ya na onu ogugu ndi mmadu.
Nweta ndakọrịta ụlọ akwụkwọ na Ubuntu, dịka maka sọftụwia dabere na sọftụwia.
Nweta nkwado nke ọbá akwụkwọ CentOS, dị ka ebe ọrụ ọrụ ọrụ / ihe nkesa na-arụ ọrụ.
N'etiti ọtụtụ ohere ndị ọzọ. Ka ọ were, Linux Bedrock ihu ọma na-enye ike ịnụ ụtọ ihe niile ahụ, n'otu oge, na a "Nnukwu cohesive Sistemụ nrụọrụ".
Etu esi etinye Bedrock Linux na MX Linux 19 na / ma obu DEBIAN 10?
Linux Bedrock na eze na-akwado ya echichi na a GNU / Linux DEBIAN nkesa, tinyere ụdị ya dị ugbu a, ya bụ, mbipute 10 (Buster). Otú ọ dị, ọ naghị akwado nkwado eze ya Linux MX, na ụdị nke ọ bụla. Mana, maka ikpe anyị, dị ka anyị kwuru na mbụ, anyị ga-etinye na a Nkesa MX Linux 19.1, 64-bit, nke n’aka nke ya dabere na ya DEBIAN 10.
Budata ma mee ihe ederede Nwụnye maka nkesa DEBIAN - bits 32/64
Hụ nkuzi ma ọ bụ akwụkwọ ntuziaka nke ojiji dị nke Bedrock Linux
Nweta enyemaka maka nhọrọ nhọrọ Bedrock Linux na oke
Gbaa iwu bụ isi na Bedrock Linux
Depụta GNU / Linux Distros dị iji wụnye
Wụnye GNU / Linux Arch Distros
Nyochaa iwu ma ọ bụ nchịkọta maka Distro (Isi na Ọdịnaya)
Ihe atụ nke igbu egbu na Arch Distro arụnyere na Bedrock Linux
Melite njiko isi
Wụnye nchịkọta dị iche iche na ntọala Arch
Dezie faịlụ nhazi nchekwa iji tinye Arch AUR Repos
Tinye ederede ederede na-esote na njedebe nke faịlụ nhazi:
Zọpụta ma pụọ ​​faịlụ nhazi.
Wụnye Arch AUR Repos package na git
N'ihe banyere Arch na ikekwe a ga-etinye Distros ndị ọzọ, ha bụ kacha nta nwụnye isi oyiyi, n'ezie, ha aghaghị ịbụ kachasị na onye ọrụ ahazi ya iji mezuo ihe kwesiri ekwesi na iji ha mee ihe, site na itinye ntinye ma mejuputa ihe di iche iche na nhazi faịlụ.
Iji kwado anyi na ntinye nke Linux Bedrock can nwere ike ịlele ihe ndị a njikọ, na ịhụ ihe GNU / Linux Distros nwere ike iji mee ntinye nke otu, ihe ndia njikọ. Na ịmata ụdị ntinye nwụnye nke ụdị 0.7 dị, ndị a njikọ.
Mgbe usoro ndị a gasịrị, ị nwere ike ijikwa Arch Linux juu onye ọrụ uto, si MX Linux 19 o DEBIAN 10, na-eji Linux Bedrock.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere nke a magburu onwe ya «Distro Linux» oku «Bedrock» ihe na-enye anyị obi ụtọ «lo mejor de muchas distros» na otu, bụ nke nnukwu mmasị na ịba uru, maka dum «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Bedrock Linux: Ihe omuma ihe Linux di ebube site na ndi ozo
Mmasị, Enwere m mmasị na nke a inwe ike MInt na Centos ọnụ, ozugbo na faboritos.
Nnọọ, kedu ka ị mere dijo
ezigbo ọdịnaya egwu
ezigbo ọdịnaya NKWO